China Flanged Silent Hlola iValve umzi-mveliso kunye nababoneleli |Dongsheng
3. I-Flange ngokwe-EN1092-2, i-PN10/16
5. Phakathi: Amanzi amatsha, amanzi olwandle, zonke iintlobo zeoli, njl.
I-Cast Iron Flanged Silent Check Valve ibonelela ngobuchule obukhulu bokutywina kuxinzelelo oluphezulu noluphantsi.Ngokukodwa, izicelo zoshishino kunye ne-HVAC, amanzi, ukufudumeza, umoya womoya kunye nezixhobo zomoya ezixinzelelekileyo zibandakanyiwe.
Le valve yentsimbi ephothiweyo ethe cwaka iza kumzimba weCast Iron, i-epoxy-coated, isihlalo se-EPDM kunye ne-Stainless Steel spring.La macandelo ayenza ukuba ibe ngumgangatho wezoqoqosho, okhuselekileyo oMgangatho okanye ivalve yokuHlola unyawo.
Ivalve iba sisivalo seNyawo esisebenza ngokupheleleyo xa sixhotyiswe ngebhaskithi.
Ifumaneka njengeMigangatho okanye iValufa yokuHlola unyawo, ubungakanani: 2″ ukuya kuthi ga kwi-14″.
Uluhlu lobushushu: -10°C ukuya ku-120°C.
Ukulinganiswa koxinzelelo: PN10/PN16/PN25 ilinganisiwe
Umgangatho okanye unyawo lweValve
Ubukhulu 2″ ukuya kwi-14″
Izixhobo zethu ezigqibeleleyo kunye nolawulo olubalaseleyo kuzo zonke izigaba zemveliso, zisenza siqinisekise ukwaneliseka kwabathengi beCast Iron Flange Silent Check Valve.Sijonge phambili ekukuboneleleni ngeemveliso zethu ixesha elide, kwaye uya kufumanisa ukuba unikezelo lwethu lunengqiqo kwaye izisombululo zigqwesile!
Sinabathengi abavela kumazwe angaphezu kwama-70 kwaye isidima sethu samkelwa ngabathengi bethu ababekekileyo.Uphuculo olungapheliyo kunye nokuzabalazela ukunqongophala kwe-0% yimigaqo-nkqubo yethu emibini ephambili yomgangatho.Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngevalvu, ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi.
1 Isikhokelo GGG40
2 Umzimba GG25/GGG40
3 Umkhono PTFE
5 Umsesane wokutywina NBR/EPDM
6 Icwecwe GGG40/Bras
L (mm) I-100 120 140 170 200 230 301 370 410
Ngaphambili: Ibhola enemisonto Jonga iValve
Okulandelayo: I-Wafer ethule iValve yokuHlola
Product Video Product parameter NO.Inxalenye yeMathiriyeli 1 Umzimba GG20/GG25/GGG40/GGG50 2 Ibhonethi GG20/GG25/GGG40/GGG50 3 Disc GG20/GG25/GGG40/GGG50 ngeBrass/Bronze/Stainless steel 0Bronzes Stainless 2CR5 Intsimbi ye-3 0CR5 Intsimbi ye-3 engenastainless 0B 1. 65 80 100 125 150 200 250 300 L 203 216 241 292 330 356 495 622 698 D PN10 165 185 200 220 250 285 340 395 445 PN16 405 460 D1 PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400 PN16 355 410 D2 PN10 102 122 138 158 188 212 268 320 370 PN...
Ubungakanani obukhulu beWafer Type Lift Check Valve
IMveliso yeMveliso yeMveliso yeMveliso yokuHlola iivalve zivumela ukuhamba kwicala elinye kwaye zithintele ngokuzenzekelayo ukuhamba kwelinye icala.Le valve isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yolwelo equlethe i-oxidative mediums eyomeleleyo, njengenkqubo yonikezelo lwamanzi, inkqubo yokubonelela ngobushushu kunye nenkqubo yeasidi njalo njalo.Ineprofayili egqwesileyo kunye nesakhiwo esilula.Isixhobo sayo sasentwasahlobo sisebenza ukukhawulezisa ukunyakaza kokuvala idiski ukuze kupheliswe isando samanzi.Le valve ibaluleke kakhulu ...